Ra’iisul wasaare kuxigeenka oo bogaadiyay kobaca dhaqaale Dalka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ra’iisul wasaare kuxigeenka oo bogaadiyay kobaca dhaqaale Dalka
Ra’iisul wasaare kuxigeenka oo bogaadiyay kobaca dhaqaale Dalka
NSTV;-Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Qadar) raiiusl wasaare kuxigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo hadal ka jeediyay Munaasabad uu xilka kula wareegayay wasiirka cusub ee wasaraadda Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliya mudane Eng. Cabdullaahi Cali Xasan ayaa siweyn uga hadlay ahmiyada wasaradaasi ay u leedahay horumarka ilaha dhaqaale ee dalka.
Raiiusl wasaare kuxigeenka ayaa sheegay in wasaradad Ganacsiga ay kamid tahay kaabayaasha dhaqaale ee dalka,loona bahaan yahay in sare loo qaado wax soo saarkeeda dhinaca ganacsiga iyo Warshadaha,iyadoo laga faaideysanayo hay’adaha caalaiga ah Ururada ganacsi iyo dowladaha daneeya Soomaaliya,kuwaasi oo intoodi badan horey heshiisyo loola galay.
Wuxuu kula dardaarmay wasiirka cusub in uu halkeedi ka sii amba qaado shaqda culus ee hortaala,isagoo wasiir Maareeye ku ammaanay waxqabadkiisa mudadii xafiiskaasi uu joogaya.
ni oo uu xilka kula wareegayay wasiirka csuuab ee wasaraadda ganacsiga Soomaaliya waxaa ka qeybgalay raiisul wasaare ku xigeenka dalka,wasiiro ka tirsan xukuumadda xildhibaano iyo marti sharaf kale.
Ugu dambeyntii waxaa shahaado sharif ku aadan shaqo wanaagiisa la guddoonsiiyay mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ay u garteen maamulka iyo shaqaalaha wasaaradda Ganacsiga intii uu xafiiskaasi joogay.
Previous articleAMISOM oo haween Somaaliyeed u samaysay wacyigalin ku aadan hannaanka dib u eegista dastuurka
Next article​Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada XFS oo daahfuray mashruuca horumarinta shaqaalaha Soomaaliyeed